Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ahoana no ahafahanao mijanona ny olana amin'ny buffering video?
Fehiny: Ny ankamaroantsika dia mampiasa finday avo lenta finday sy mpanamory finday ho an'ny asa ary koa tanjona fialamboly. Raha resaka fialamboly, fijerena sarimihetsika, horonan-tsary YouTube, ary tantara an-tsary na horonan-tsary nakarina amin'ny sehatra sosialy malaza no safidintsika. Fa efa niatrika olana buffering video ve ianao rehefa mandefa atiny an-tserasera? Tsy izany ve no zavatra manelingelina indrindra? Tsy izany intsony! Ity lahatsoratra ity dia hamela anao amin'ny hacks vitsivitsy azonao ampiasaina mba hamahana mora foana ny olana amin'ny fampidirana horonantsary amin'ny sehatra rehetra.
Raha mijery atiny an-tserasera tsy tapaka ianao dia tsy maintsy nihaona tamin'ny takelaka fampandrenesana horonantsary mampatahotra ianao indraindray.
Io faribolana mihodina tsy miova io angamba no zavatra farany tianao ho hita rehefa manandrana milamina amin'ny filma misy fandroana popcorn mandritra ny faran'ny herinandro ianao.
Mety hanimba ny traikefa iray manontolo ho anao izany.
Fa efa nieritreritra ve ianao hoe maninona no mitranga izany? Mazava ho azy fa ny hafainganam-pandeha amin'ny Internet miadana dia antony iray mahatonga ny horonan-tsary hilalao, saingy mety hisy antony hafa ao ambadik'ity olana ity ve? Ankoatr'izay, misy zavatra azonao atao ve hanafoanana azy? Miaraha aminay rehefa asehonay aminao ny fomba hampijanonana ny olana amin'ny famonoana horonantsary indray mandeha.
Ny zavatra voalohany aloha - Fa maninona no miova ny vidéo?
Rehefa mandefa horonantsary mivantana avy amin'ny Internet ianao, tsy voatahiry ao amin'ny tahirinao eo an-toerana ilay horonantsary fa amin'ny mpizara rahona. Izy io dia alaina ho tahiry amin'ny fotoana tena izy ary lalaovina amin'ny fitaovanao. Ny fanemorana na fahatapahana amin'ny fisintomana dia mety hahatonga ilay horonan-tsary mihemotra na mihitsoka mandritra ny filalaovana indray, ka manery anao hahita marika famantarana eo amin'ny efijery. Ity fizotrany ity dia antsoina hoe "buffering", mekanisma fampidirana horonantsary anaty buffer fahatsiarovana an'ilay fitaovana.
Ny tsara indrindra, ny famoahana ilay horonantsary dia tokony hitranga amin'ny fomba milamina ka tsy mahita glitches mandritra ny playback ny mpampiasa farany. Saingy tsy mitranga izany isaky ny misy noho ireto antony manaraka ireto:
Hafainganana amin'ny Internet
Eny, zava-dehibe ny hafainganana. Matetika ireo mpikarakara serivisy amin'ny Internet dia miady amin'ny ady sarotra, mampanantena ny mpampiasa ny fampidinana data haingana indrindra noho io antony io. Raha tsy dia avo loatra ny fantsom-pifandraisana Internet anao dia matetika ianao no mijaly noho ny olana amin'ny famonoana horonantsary. Mety hiatrika an'io olana io koa ianao raha efa lany andro na tsy mandeha tsara ny modem na ny router. Fitaovana maro be mifandray amin'ny tambajotra iray ihany no afaka manary ity lesoka ity.
Olana amin'ny fitaovana
Oviana ianao no nanavao farany ny router? Na dia tsara aza ny manavao ny router anao amin'ny kinova farany, dia indraindray misy loharano olana ny fampiasana router misy ny firmware. Hamarino raha mifanaraka amin'ny nomen'ny ISP anao ny mombamomba ny router. Miaraka amin'izany, alao antoka fa tsy miatrika olana ny solosainanao toy ny mpamily tambajotra efa lany andro, mpamily karatra sary simika, mpitety tranonkala iray diso, sns.
Mandrosoa, andao izao hiezaka ny hijery ny fomba fanitsiana ny buffering video amin'ny alàlan'ny vahaolana tsotra.
Ahoana ny fomba hampijanonana ny buffering video
Misy vahaolana marobe amin'ny olan'ny famonoana horonan-tsary, noho izany dia tsara ny manomboka amin'ny fanamboarana boky tsotra (voatanisa voalohany) ary avy eo mandroso mankany amin'ny manaraka raha tsy mandeha ilay teo aloha.
1. Zahao ny hafainganan'ny Internet
Raha mpikambana maromaro no mampiasa Internet ao amin'ny ankohonanao dia mila fifandraisana haingam-pandeha ianao, izay afaka manohana ny fivezivezena tsara kalitao amin'ny fitaovana maro miaraka. Raha te hahamarina ny hafainganan'ny hafainganan'ny fitaovanao (amin'ny vidiny misy buffering) dia manaova fitsapana hafainganam-pandeha amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny tranokalanao. Raha ambany kokoa noho ny ilainao ny hafainganana dia mifandraisa amin'ny ISP anao raha te hanana drafitra fantsom-pifandraisana tsaratsara kokoa ianao.
Fitsapana ny hafainganam-pandehan'ny Internet
2. Fandaharana mivoaka mihodina ao ambadika
Raha sendra olana buffering amin'ny solosainao ianao dia zahao amin'ny alàlan'ny Task Manager ny enta-mavesatrao ankehitriny. Raha be loatra ny asan'ny solo-sainanao ary mampiseho fampiasana be fahatsiarovana ianao, dia tsy ho tsara ny filalaovana video amin'ny streaming. Satria ny loharanon-tsolosaina dia mibodo any amin'ny toeran-kafa, tsy handefa horonantsary araka ny tokony ho izy. Mba handresena ilay olana dia kitiho ny lisitry ny fizotrana ary zahao ireo izay mandany loharanon-karena be indrindra. Raha tsy mampiasa azy ireo ianao dia safidio amin'ny fipihana azy ireo indray mandeha, ary tsindrio ilay “Tapitra ny lahasa” bokotra hamaranana ny fizotrany.
Manakatona ny fizotran'ny lohataona mihazakazaka ao aoriana
3. Ahenao ny kalitaon'ny horonan-tsary jerenao
Tsy takona afenina fa ny horonan-tsary avo lenta dia lehibe kokoa amin'ny haben'ny rakitra. Ankehitriny, arakaraka ny haben'ny horonantsary iray no mahabe ny fotoana sy ny hery ilaina handefasana azy amin'ny internet. Ka hanatsarana kely kokoa ny traikefa nijerena dia manandrama mijery kinova famahana ambany kokoa an'ilay horonantsary. Azonao atao ny mahita ny safidy hisafidianana ny vahaolana amin'ny video tianao ho jerena ao amin'ny Netflix, YouTube, sy ireo sehatra hafa.
Ahenao ny kalitaon'ny horonan-tsary jerenao
4. Ampidino amin'ny fitaovanao ilay horonan-tsary
Raha tsy misy zavatra mandeha hafa, ny vahaolana tsara indrindra dia ny mampidina ny horonan-tsary ao amin'ny fitehirizam-bokinao. Amin'izay, farafaharatsiny mba vita ny fisintomana dia ho afaka hijery azy tsy misy fahatapahana ianao. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny hack hack mora indrindra sy haingana indrindra amin'ny famoronana buffer lehibe kokoa amin'ny alàlan'ny fiatoana ny renirano mandritra ny minitra vitsy ary avy eo mamerina azy avy eo.
Ampidino amin'ny fitaovana misy anao ilay horonantsary na miato kely mba hamoronana buffer lehibe kokoa
Nofidina ilay horonantsary fa tsy mandeha foana io? Andramo ity!
Raha efa nandramanao ny fitsipiky ny fampidinana ilay video nefa mbola tsy milamina tsara io dia mety ho simba na ho simba ilay rakitra nakarina. Amin'ny tranga toy izany, manamboatra azy amin'ny azo antoka sy mahomby fitaovana fanamboarana horonan-tsary is recommended.
Raha ny hevitray, ny Stellar Repair for Video no safidy tsara indrindra amin'ity scenario ity. Miady amin'ny horonan-tsary simba amin'ny endrika rehetra, ity rindrambaiko ity no valiny tsara indrindra amin'ilay olana "ahoana ny fijanonana amin'ny famonoana horonantsary". Ny fitaovana dia manaraka fomba tsotra 3-dingana. Izy io dia miaraka amin'ny interface interface intuitive izay mahatonga azy io ho mora foana.
Ity no fomba ahafahanao mampiasa an'ity fitaovana ity hanamboarana ny buffering video:
Mandehana mankany amin'ny pejy vokatra ofisialy ho an'ny Stellar Repair for Video ary kitiho ny “Fampidinana maimaimpoana” rohy.
Aorian'ny fisintomana ilay rakitra, kitiho indroa raha hametraka ilay fampiharana.
Vantany vao vita ny fametrahana dia alefaso ny fanamboarana Stellar for Video.
Ao amin'ny rindrambaiko misy ny lozisialy, kitiho eo amin'ilay efajoro hoe "Manampia rakitra" manampy ny rakitra video izay mila amboarina. Azonao atao ny manampy rakitra maro eto.
Fanamboarana stellar ho an'ny efijery an-trano Video (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Rehefa avy nanampy ny fisie ireo fitaovana dia tsindrio ilay "Repair" bokotra hanombohana ny fizotran'ny fanamboarana.
Fanamboarana stellar ho an'ny rakitra Video ho amboarina nampiana (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Hiseho ny bara fandrosoana hanehoana ny habetsaky ny dingana vita.
Fanamboarana stellar amin'ny fandrosoana amin'ny fanamboarana horonantsary
Aorian'ny fanamboarana ireo rakitra an-tsary dia azonao atao ny mijery azy ireo alohan'ny hitahirizanao azy amin'ny solosainao.
Fanamboarana stellar ho an'ny horonantsary topi-maso mialoha ny horonan-tsary (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Aorian'ny fanamboarana ilay rakitra video alaina dia andramo ny milalao azy. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hiatrika olana amin'ny famonoana video ianao izao.
Ny famonoana horonantsary dia olana iray mampijaly ny mpamaky atiny an-tserasera. Fa soa ihany fa misy vahaolana ankehitriny! Ho fanampin'ny fanamarinana ny hafainganana amin'ny Internet sy ny fanakatonana ny fampiharana ambadika anao dia azo andramana ihany koa ny fampidinana ilay horonan-tsary amin'ny rafitrao eo an-toerana. Raha tsy afaka milalao ilay horonantsary alaina dia aza misalasala manamboatra azy amin'ny fitaovana toy ny Stellar Repair for Video hanamboarana buffering video.